Emirates manidina mpandeha mankany Zagreb amin'ity fahavaratra ity
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Emirates manidina mpandeha mankany Zagreb amin'ity fahavaratra ity
Zagreb dia tanàna manana tantara sy kolontsaina manankarena ary fantatra amin'ny maritrano taonjato faha-18. Fisarihana lehibe ho an'ny mpizahatany amin'ny fahavaratra izy io, ary mba hananana ny tinady avo kokoa amin'ny dia mankany amin'ity toerana fizahan-tany malaza ity dia hanomboka ny serivisy hataony ny seranam-piaramanidina Emirates amin'ity fahavaratra ity.
Ny fiaramanidina dia hampiasa ny Boeing 777-300ER ho an'ny zotra izay hiasa mankany Zagreb hatramin'ny 26 Oktobra 2019. Hanomboka hiasa mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina ny flydubai fiaramanidina mpiara-miasa. Ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny zotram-pitaterana an'habakabaka roa tonta dia miantoka ny fahafaha-miasa manaparitaka ny filan'ny mpanjifa tsara indrindra.
Ny sidina EK 129 dia hiala ao Dubai amin'ny 8:30 ary tonga ao Zagreb amin'ny 12:35 ora eo an-toerana, mampiasa Boeing 777-300ER. Ny sidina miverina, EK 130 dia hiala ao Zagreb amin'ny 15:25 ary tonga any Dubai amin'ny 23:00 ora eo an-toerana. Noho ny asa fanavaozana kasaina hatao amin'ny lalam-pirenena atsimo amin'ny DXB manomboka ny 16 aprily hatramin'ny 30 may 2019, ny sidina Emirates mankany Zagreb dia hiasa in-4 isan-kerinandro amin'ny sabotsy, alatsinainy, talata ary alakamisy. Manomboka amin'ny 31 Mey 2019 ho avy izao dia ho serivisy isan'andro ny zotra.
Any Zagreb, ny mpitsidika dia afaka mahita ny faritra ambony sy ambany tanàna izay mitazona ny sasany amin'ireo katedraly sy tranombakoka malaza indrindra eto an-tany. Ny mpitsangatsangana dia afaka mahita tanàna Kroaty malaza any amin'ny Dalmatian Coast, toa ny Split sy Dubrovnik. Ny sidina mpiaramiasa Emirates, flydubai, dia manolotra safidy sidina ho an'ny mpandeha mankany Dubrovnik indroa isan-kerinandro amin'ny alahady sy alakamisy. Ny sidina FZ 719 dia miala ao Dubai amin'ny 9:00 ary tonga ao Zagreb amin'ny 13:00 ora eo an-toerana.
Centara haneho ny lova nentin-drazana Thai tamin'ny alàlan'ny Songkran
Seranam-piaramanidina amerikana: tranom-bahiny vaovao, fitoeran-kitapo lehibe amboniny